Hoppers marobe marobe tokana milanja static Organic & Compound pupuk mpamatsy mpamatsy sy orinasa | YiZheng
Inona ilay masinina manaikitra amin'ny zezika Static?
Rafitra famonoana mandeha ho azy static dia fitaovana milomano mandeha ho azy izay afaka miasa miaraka amin'ny fitaovana zezika BB, fitaovana zezika organika, fitaovana zezika mitambatra ary fitaovana zezika mitambatra, ary afaka mameno ny tahan'ny mandeha ho azy arakaraka ny filan'ny mpanjifa.
Ao anatin'ny tsipika famokarana zezika feno, izy io dia tokony hohaingoina ary ampiasaina handrefesana sy hametahana ireo karazan-karena rehetra. Ary ny ankamaroany dia tokony hampiasaina ao amin'nytsipika famokarana zezika organika na ny tsipika famokarana zezika NPK ary ny famokarana zezika zezika andiany hafa. Amin'ny ankapobeny, ny milina famonoana mandeha ho azy dia ampiasaina amin'ny fandanjana marina sy ny fampifangaroana ireo akora isan-karazany, manolo ny fandrefesana ny boky torolàlana sy ny boky.
Endri-javatra amin'ny milina fanangonam-bokatra Static
Ny milina famonoana mandeha ho azy tsy miova dia manana ny maha-izy azy ny fandrefesana avo lenta, ny fizarana haingana ary ny diplaoma automation avo lenta, izay iray amin'ireo ampahany lehibe amin'ny fitaovam-pamokarana zezika feno.
(1) Rafitra famonoana sy doka mandeha ho azy tanteraka
(2) Fahaiza-manao isan-karazany 5 ka hatramin'ny 100 taonina isan'ora
(3) Ny Masinina mitambatra mandeha ho azy afaka miasa amina karazan-kavo 3 ka hatramin'ny 10
(4) Fahamarinana avo lenta
(5) Tsy voatery arakaraka ny fizotrany: fehikibo mifanitsy, firafitra baffle, firafitry ny fehin-kibo
(6) Fehikibo tsy manam-paharoa
(7) Ny rafitry ny famonoana dia mameno ny akora amin'ny fitaovana tsirairay arakaraka ny toerana misy azy
Fampisehoana horonantsary horonan-tsarimihetsika vita amin'ny volo
Safidy Model Model Batching Static Static
Ny fahaiza-manome sakafo dia 0.05m / h-1000m / h, ary ny sakany amin'ny conveyor dia 500mm-1800mm. Ny elanelana afovoan'ny roller dia 1000mm-8000mm. izanyZezika Static Ny milina fanangonana dia azo namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpampiasa.
Teo aloha: Masinina poloney boribory biolojika
Manaraka: Mpisaraka amin'ny ranoka matevina mifangaro